linoo-ayar: သာသာ ထိုးထိုး ဘာဘာ ဘိုးဘိုး ရဲ့ စာချွန်လွှာ
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:16 AM သတင်းများ
ေလညှာက အေနသာေပမဲ့ တြပည်တရွာက မေသမချာ မေရမရာ ြဖစ်ေနြကပံု ေတွကိုေတာ့ြဖင့် ဘာဘာ ဘိုးဘိုးက သာသာ ထိုးထိုးေလး တင်ြပလိုက် ပါရေစ။
မုတ်သုန်ေလ ေြမာက်ြပန်ေလလို ရာသီအလိုက် တိုက်ခတ်တတ်ြကတဲ့ ေလမျိုးေတွလို ခုတမျိုး ေတာ်ြကာတမျိုး အမျိုးမျိုးအဖံုဖံု စံုလင်စွာြဖင့် ေနွေလရူးလို ေပွချင်တိုင်းေပွ လိုက်ေလှျာက် လုပ်ေနြကတဲ့ ြပည်ပေရာက် နိုင်ငံေရးအဖွဲ့စည်း အသီးသီးနဲ့ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပုသူ အများစုဟာ အာဏာရူး စစ် အစိုးရ ရဲ့ ေြပာင်းလဲတဲ့ မူဝါဒ လမ်းစဉ်နဲ့ လုပ်ရပ်ေတွအေပါ် ြကည့်ြပီး ေနာက်ေတာ်ပါးက တဖဝါးမခွာ လိုက်ေလှျာက် လုပ်ေနြကတာကို ေတွ့ြမင်ေနြကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ြပည်ပ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းေတွ အေနနဲ့ တီထွင်ြကံဆြပီး စစ်အစိုးရ အေပါ်လက်ဦးမှု ရေအာင် ဦးေဆာင်၍ တိုက်ခိုက်တာမျိုး ထိုးစစ်ဆင် လှုပ်ရှားတာမျိုး ကိုေတာ့ြဖင့် တခါသားမှ လံုးဝဥဿံု မေတွ့ရ သေလာက်ပါပဲ။ ဒီြကားထဲ ဆုတ်ကပ်ကို ေရာက်လာေနြပီြဖစ်တဲ့ ကမာြ္ဘကီးရဲ့ သဘာဝ ေဘးအန္တရာယ် ေတွကိုပါ ရင်ဆိုင် ြကံုေတွ့ ေနရေလေတာ့ ကျွနု်ပ်တို့ ြပည်သူေတွခမျာ အလွန့်အလွန်ကိုပဲ ေခတ်ေနာက်ကျ ကျန်ရစ်ေနခဲ့ပါြပီ၊ စာေရးဆရာမ ဂျူးေလသံနဲ့ ေြပာရယင် ရာဇဝင်ထဲ မှာ ြမန်မာ ကို ထားရစ်ခဲ့ ဆိုရင်လည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
အခုလို ေခတ်မှီတိုးတက်လှတဲ့ အိုင်တီနည်းပညာ ေခတ်ြကီးထဲမှာ အြမဲတမ်း ေနာက်ဆံုး က လိုက် ေနြကရတဲ့ ကျွနု်ပ်တို့ ဗမာြပည်သူေတွ အေန နဲ့ကေတာ့ ဒီ့ထက်ပိုြပီး ေခတ်ေနာက်ကျ စရာမရှိေတာ့ဘူး ြဖစ်လို့ အချုိ့က ဆိုယင် ေနာက်ကျြခင်းများမှာ တို့များနှယ် ေခါက်ရိုးများကို ကျုိးလို့၊ တချုိ့များ မေတာ့ မ.ဆ.လ လို့ေခါ်တဲ့ ြမန်မာ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ ရဲ့ မူအရ မလုပ်၊ မရှုတ်၊ မြပုတ် ဆိုတာလိုမျိုး မူကို မသိမသာ ကိုင်စွဲလို့ ဘာမှဝင်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ြခင်း မြပုြကပဲ ေနေနေတာ့ ြပုတ်စရာ အေြကာင်း မရှိ အန္တရာယ်လဲ ကင်း ေဘးရှင်း ေနနိုင်ြကေပလိမ့် မေပါ့။ အဲဒီလို ပါးစပ်က ဒီမို၊ အတွင်းက မသိစိတ် သင်းကွပ်ြခင်း ခံရတဲ့ ေခါင်းေဆာင်ေတွ ရဲ့ ေနာက်ကို လိုက်ေနြကမယ် ဆိုရင်ေတာ့ြဖင့် “ထူးမြခားနား” ပတ်ပျုိးလိုပဲ ဘယ်လိုမှ နလံြပန်ထူ လာနိုင်စရာအြကာင်း မရှိေတာ့ပါဘူး။
ဘိုးဘိုးတို့ အရွယ်ကလဲ ေတာ်လှန်ေရး ေကာင်စီမတက်မီ အချိန် ကတည်းကတာ ေမွးဖွားြကီးြပင်း လာတာ ြမန်မာ့နိုင်ငံ ေရးရာေတွကို ပက်ပက်စက်စက် လံုးေစ့ပတ်ေစ့ မသိခဲ့ေသာ်ြငားလည်း ယေန့ြဖစ်ပျက်မှု ရပ်တည်မှု အေြခအေနေတွကို ေလ့လာ သံုးသပ်ြကည့်ြခင်း အားြဖင့် အေတာ်ေလးေတာ့ တီးေခါက်မိပါတယ်၊ ြမင်နိုင် ေြပာနိုင်ပါတယ်။ ခက်တာက လူသားအားလံုးဟာ မှန်တာကို ြကိုက်ြကတယ် လက္ခံချင်ြကတဲ့ သူေတွချည်း ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထူးြခားတာက မှန်တာကို ဒုတ်ထိုးအိုးေပါက် ဒဲ့ေြပာရင် ဒဲ့ေရးရင်ေတာ့ ဘယ်သူမှ သိပ်ြပီး မြကိုက်ချင်ြကေတာ့တာ ကိုက ေလာကဓမ္မတာ တခုလို ြဖစ်ေနြပန်တယ်။ ( ဒီလို ေြပာေတာ့ ... အေမာင်မင်း လွန်ရာကျမယ် မဟုတ်ပါလား? )
၁၉၈၈ ခုနှစ် ေနာက်ပိုင်းမှသည် ယခုဆိုလှျင် နှစ်ေပါင်း (၂ဝ)ေကျာ် ခရီးမှာ ထူးထူးြခားြခား ေြပာင်းလဲ တိုးတက်လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံေရး အေြပာင်းအလဲရယ်လို့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မရှိခဲ့ မေတွ့ခဲ့ ရေသးသလို ေအာင်ြမင်မှု လမ်းစကိုပင် ဂူးဂဲယ် အပ်( Google Earth ) နှင့်ပင် ရှာေဖွမေတွ့ရ G.P.S ( Global Position System ) ပါ ထပ်ေဆာင်း၍ ရှာရမလို ြဖစ်ေနေချသည်။ အေနာက်နိုင်ငံများ တိုးတက် ေြပာင်းလဲရြခင်းသည် နည်းလမ်းသစ် များကိုရှာေဖွြခင်း၊ ေလ့လာသံုးသပ်ြခင်း လက်ေတွ့ကျကျ အေကာင်ထည်ေဖါ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း တို့ေြကာင့်သာ တိုးတက်မှုနှုန်း ြမန်ဆန်သည်ဟု ယူဆြကေပသည်၊ သတ်မှတ်ရေပမည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ြမန်မာေတွက သည်လို မဟုတ်ေချ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မတီထွင် မြကံဆချင်ြက ၊ သူများက တီထွင်ြကံဆမည် ဆိုရင်လည်း ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးအားေပး ကူညီြခင်း အလျဉ်းမရှိ၊ အပျက်သေဘာကို ေဆာင်ကာ ကန့်ကွက်ြက ၊ရှုတ်ချြက၊ ဖျက်မျဉ်းများက များေန၍ ြဖစ်မည် ထင်သည်။ နိုင်ငံေရး သမားေဟာင်းြကီးများ ကလဲ အလွန့်အလွန်ပင် အေတွးအေခါ် ြကံဆမှုအပိုင်း အားနည်း ေနသည်ေလာ? (သို့တည်း မဟုတ်) ေတွးလွန်း၍ ေခါ်မရတဲ့ အေတွးအေခါ်ေတွနဲ့ ေတွေဝ ေနြကသည်ေလာ? ဟု စဉ်းစားစရာ ြဖစ်လာပါေတာ့သည်။
နိုင်ငံေရး အေတွးအေခါ်များကို ေြပာင်းလဲလာေသာ ေခတ်ကာလနဲ့ အညီ ကိုက်ညီေအာင် အေြခအေနအရ ေြပာင်းလဲပစ်ရမည့် သေဘာေဆာင်သည်။ ေတာ်လှန်ေရးကို ေသွးနှင့် လုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ မှန်ေသာ်လည်း ဒါကို ေနာက်ဆံုးအဆင့် ေရာက်မှသာ လုပ်ေဆာင် သင့်ေပသည်ဟု ယူဆမိသည်။ ြပည်ပေရာက် နိုင်ငံေရး အဖွဲ့အစည်း များသည်လည်း ရွက်ကျပင်ေပါက် များပမာ ေရာက်ရာ ကျရာ ေနရာတိုင်းမှာပင် အပင်ေပါက် (အဖွဲ့ေတွ ဖွဲ့) ထပ်တလဲလဲ ခွဲထွက် ဖွဲ့ြကသည်က လွဲလို့ တစုတေဝးတည်း ေပါင်းစည်းြခင်း၊ ဖွဲ့စည်း တည်ေထာင်ြခင်း ဆိုတာမျိုးကိုေတာ့ြဖင့် ြကားရဖို့ ေဝလာေဝးစွ၊ စိတ်ကူးထဲပင် ေတွးမိသည့်ပံု မြမင်ပါ ။ ဒီြကားထဲ ဒီမိုကေရစီက ဘယ်နားေနသည် မသိေသး ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စု အေရးကို ဦးစားေပး ြကံရွယ်ေနြကသူ များကလည်း တေမှာင့်၊ ဒီမိုကေရစီ တိုင်းြပည်ရယ်လို့ ေပါ်ေပါက်လာကာမှ ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စု နိုင်ငံဆိုတာ ြဖစ်လာနိုင်မယ် ဆိုတာကိုမှ မသိြကလို့ဘဲလား မသိကျိုးကျွံ ြပုေနြကတာဘဲလား ဆိုတာကိုေတာ့ မိမိ ဖာသာ မိမိအသိဆံုးပင် ြဖစ်ချိမ့်မည်။
ြပည်ပရှိ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ သည်ပင်လှျင် အချင်းချင်း စုစည်းမှုအား ပျက်ြပားလာကာ အမိန့်အာဏာ လူအင်အား မရှိေသာ ဝန်ြကီးများ ကိုယ်တိုင် မ.ဆ.လ အေငွ့အသက်များ မကုန်ေသးေြကာင်းကို အမိန့်အာဏာ မရှိေသာ အစိုးရအဖွဲ့တွင်း အာဏာလု ေရွးချယ်ပွဲ ဒက်ဘလင် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ၌ ြပုလုပ်ြကရင်း စိတ်လိုက်မာန်ပါ ရန်ပွဲေတွကိုပါ ဆင်နွဲေနြကသည်မှာ ကမာ္ဘ့အလည်တွင် ြမန်မာ့သတ္တိကို တလွဲဆံပင်ေကာင်း အရှက် အေြကာက်ကင်းစွာ ေဖါ်ြပေနြခင်းသည် လွန်စွာမှပင် သတိ သံေဝဂ ရရှိသင့်ေပသည်။ အမိန့်အာဏာ မရရှိေသာ်ြငား မည်သည့် အကျိုးတရားများ ရရှိေန၍ ဤသို့ြပုမူခဲ့ြကသည် ကိုေတာ့ြဖင့် ကာယကံရှင်များ သာလှျင် အသိဆံုးပင် ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ ဘိုးဘိုး အေနနဲ့ေတာ့ တြခားေသာ ဘာေသာ ညာေသာေတွကို မေတွးချင် မေရးချင် လိုေတာ့ပါြပီ။
ဆန္ဒြပ လှုပ်ရှားေနြကသူ အများစုမှာလည်း မိမိတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒများ ြပည့်ဝေစရန်သာ ရည်ရွယ်ြခင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ အားလပ်ေသာ အချိန်အပိုင်း အြခားများတွင်သာ ြပုလုပ်ေနြကြခင်း၊ တခါတရံ မိမိကိုယ်တိုင် ကပင် မည်သည့်အတွက် မည်သို့ လုပ်ေဆာင်ေနြကသည် ကိုပင် မသိြကသူက များေနေပသည်။ ဒီေတာ့ ဘာကို ရည်ရွယ်ြပီး ဘာေတွ ြဖစ်လာနိုင်မယ် ဆိုတာလဲ မသိ၊ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ပဲ နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ အချိန်တို့ လွန်ေြမာက်၍ (၂၁)နှစ်ပင် ြပည့်ေတာ့မည် ြဖစ်ေပသည်။ တခါတရံ မှာေတာ့ ေခါင်းေဆာင်လုပ်သူေတွ တချို့ရယ်ေြကာင့် ေနာက်လိုက်ေတွမှာ ဘယ်ေနာက်ကို လိုက်ရမှန်း မသိ ြဖစ်ေနြကရတာ ကိုလည်း စိတ်မေကာင်းြခင်း များစွာြဖင့် ေတွ့ြမင် ေနြကရသည်မှာလည်း လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက် မိရေပသည်။
မိမိ တို့ေခါင်းေဆာင်များရဲ့ လက်သံုး စကားအတိုင်း ( တူတာေတွ တွဲလုပ်ြက ၊ မတူတာေတွ ခွဲလုပ်ြကမည် ) ဆိုေသာ ေဆာင်ပုဒ်ကိုပင် ေမ့ေလှျာ့ေနြကသည်ေလာ ။ အခုေတာ့ တူတာေတွ ကိုပါ ခွဲထွက်၍ သူ့ထက်ငါ အလုအယက် လုပ်ေနြကတာကို ြမင်ေတွ့ ြကားသိ ေနရြပန်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး ေတွးမိြပန်ေတာ့ ရင်ေလး မိရြပန်သည်။ တခုေတာ့ရှိသည် ဦးေဆာင်ပါတီ (N.L.D) ကိုေတာ့ အားလံုးက ဝိုင်းရံေနြကတာကိုပဲ ေကျးဇူးတင် ရေပအုန်းမည်။
“၈၈”ရဲ့ ေကျာင်းသား ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်းေတွကို ြပန်လည် သံုးသပ် တင်ြပရမည် ဆိုလှျင် ဟိုတချိန်တုန်းက ေတာထဲမှာတုန်းက ဆိုတာမျိုးေတွကိုသာ ြပန်ေြပာင်း ေြပာဆိုြကတာက လွဲလို့ ေရှ့ေရးအတွက် ဘာကိုမှ မယ်မယ်ရရ ေြပာဆို တင်ြပနိုင်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း ေဝဖန်သံုးသပ် နိုင်ြခင်းများကို အလျဉ်းမရှိြကဘဲ နိုင်ငံတကာ လှည့်လည်ြပီး လိုအပ်တာများကို မှာစားြပီး အိပ်မက်ေတွေပး ြပန်သွားြကတာ ကိုလည်း အားလံုး အသိအြမင် တခုတ်တရ ရှိေနြကေသးသည် မဟုတ်ပါလား။
ဒီေတာ့ အားလံုးကို ြခံုငံုသံုးသပ်ရပါမူ ဦးေဆာင်ပါတီများ နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ေကျာင်းသားများ၊ အတိုက်အခံပါတီ အဖွဲ့အစည်း များသည်ပင် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ေထာင်ချေနသည့် ြကားမှပင် အမျိုးမျိုးေသာ လှုပ်ရှားအံတုမှု အံုြကွမှုနဲ့ ထြကွမှုများကို အလျဉ်းသင့်သလို လှုပ်ရှား ေနြကပါလှျက်နှင့် ြပည်ပေရာက် ဒီမိုကေရစီအေရး လှုပ်ရှား ေဆာင်ရွက်ေနြကေသာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် အတိုက်အခံ ပါတီများ ပံ့ပိုးကူညီ ေထာက်ပံ့ေနြကေသာ အဖွဲ့အစည်းမျာ းအေနြဖင့် အမှန်တကယ်ပင် လှုပ်ရှားနိုင်ေသာ လုပ်ေဆာင်နိုင်ေသာ ေြပာင်းလဲမှု ြပုနိုင်ြကေသာ ြပည်တွင်းမှ ရဲေဘာ်မိတ်ေဆွများအား အမှန်ပင်လိုအပ်ေသာ ေငွေြကး အြကံဉာဏ် အင်အားများ အြဖစ် ပံ့ပိုးနိုင်ြကေစရန် အထူးပင် အေလးထား ေဆာင်ရွက်သင့်ပါေြကာင်းကို သတိြပုမိေစရန် ရည်ရွယ်လှျက် ဘာဘာ ဘိုးဘိုး မှ သာသာ ထိုးထိုးေလး ေရးသား တင်ြပ လိုက်ရပါေတာ့သည်။
တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလှျင် .... ြကံုမှ ြကံုတတ် ပေလတယ် ဟု ခွင့်လွှတ် နိုင်ြကပါေစ။
(လူထုအသံ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူေဖာ်ြပသည်)
2 Response to 'သာသာ ထိုးထိုး ဘာဘာ ဘိုးဘိုး ရဲ့ စာချွန်လွှာ'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/06/blog-post_04.html?showComment=1244282395360#c6714987790476717018'> June 6, 2009 at 2:59 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/06/blog-post_04.html?showComment=1244444668661#c8230944522965805753'> June 8, 2009 at 12:04 AM